अर्को सातादेखि ‘स्मार्ट लकडाउन’
काठमाडौँ । कोभिड १९ व्यवस्थापन निर्देशक समितिले कोरोनाभाइरसको संक्रमणको जोखिम रोक्ने र सँगै अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन र आपूर्ति सहित ‘स्मार्ट लक डाउन’तर्फ जाने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको समितिको दोस्रो बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । विस्तृतमा
कुटपिट, अभद्र व्यवहार अभियोगमा ज्वाला संग्रौलासहित तीनजना प्रहरी हिरासतमा,
निजी सवारी जोर-बिजोर अनुसार चल्ने, पसलहरू बारअनुसार खुल्ने
गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा काफ्ले नियुक्त
काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा एकसाता थपियो
काठमाडौँ उपत्यकामा ५४८ जना संक्रमित थपिए
अकल्पनिय बाढीपछिको मेलम्ची (फोटोमा)
नयाँ शक्ति पार्टीका जिल्ला संयाेजक मृत अवस्थामा भेटिए
सुर्खेत । नयाँ शक्ति पार्टी जुम्ला जिल्ला संयोजक तथा चन्दननाथ नगरपालिका–२ निवासी ४३ वर्षीय राधाकृष्ण बुढ्थापा मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।
एउटै वडाका १ सय ६१ महिला इराकमा
चौतारा । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–५ मार्मिङका एउटै घरका चार जनासम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएको भेटिएको छ ।
घाँस काट्न गएकी महिलालार्इ बाघले लग्याे
चितवन । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. २५ स्थित जंगलमा घाँस काट्न गएकी एक महिलालाई आज बिहान बाघले लगेको छ ।
अपहरित बालकको हत्या
काठमाडौं । काठमाडौंको काँडाघारीबाट अपहरणमा परेका बालकको हत्या भएको छ । आइतबार साँझ अपहरित ११ वर्ष वर्षीय बालक निशान खड्काको हत्या भएको हो ।
बालक अपहरणकारी र प्रहरीबीच मुठभेडः दुई जनाको मृत्यु
काठमाडौं । काठमाडौंको काँडाघारीबाट अपहरणमा परेका बालकको खोजीमा संलग्न प्रहरी र अपहरणकारीबीच भएको दोहोरो मुठभेडमा दुईजना अपहरणकारी मारिएका छन् ।
अपराध नियन्त्रणका लागि सिसी क्यामेरा जडान
रोल्पा । सदरमुकाम लिवाङ बजारमा अब सिसी क्यामेराबाटै निगरानी गरिने भएको छ । अपराध अनुसन्धान तथा शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्ने उद्देश्यले उक्त क्यामेरा जडान गरिएको हो ।
बजारको ढलले बस्ती दुर्गन्धित
सोलुखुम्बु । बजारको ढल पसेपछि सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका– ४ फाप्लुको दलित बस्ती दुर्गन्धित भएको छ ।
आकाशे पानीको भरमा पुनःनिर्माण !
खोटाङ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नं ४ का विनोद राईलाई भूकम्पले भत्किएको घर पुनःनिर्माण गर्न पानीका लागि वर्षा नै कुर्नुप¥यो ।
बालक अपहरणमा संलग्न २ जना सानाेठिमीबाट पक्राउ, बालककाे स्थिती अज्ञात
काठमाडौँ । आइतबार साँझ काठमाडौंको काँडाघारीबाट अपहरणमा परेका ११ वर्षीय बालक निशान खड्काको अपहरणमा संलग्न २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
कोठी सञ्चालन गरेको अभियोगमा लाजिम्पाटमा २ युवती पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले भाडामा लिएर कोठी चलाउने २ युवतीलाई पक्राउ गरेको छ । काठमाडौंको लाजिम्पाटमा फ्ल्याट नै लिएर कोठी चलाउँदै आएका उनीहरुलाई प्रहरीले सोमबार बिहान पक्राउ गरेको हो ।